Ahụhụ Mmiri - Anụmanụ Nchịkọta Na-aga Akwa Ọsọ | Martech Zone
Wenezde, August 12, 2015 Jim Sterne
Data, dị ka mmiri, na-abịa n'ọtụtụ ụzọ. Uche mmadu amalitela inyocha otutu data na abia anyi n'ihi na odi otutu n'ime ya.
Mgbe ị mepere anya na ntị gị, data dị ebe niile. A na-emeso agba nke mgbidi ahụ, ụda ikuku oyi na isi nke kọfị onye agbata obi gị dị ka iru mmiri. Mmiri dị n’ikuku oge niile mana ọ baghị uru ị toa ntị na ya.
Mgbe mmiri na-abanye n'ọgba aghara, ọ na-amanye gị ịhụ ya ma na-eme ka nghọta ụwa gbara gị gburugburu sie ike karị. Usoro data ezughi ezu, data rụrụ arụ, sayensị na-adịghị mma, nkwubi okwu ụgha na mmetụ echiche na-eme ka ị tụfuo ụzọ gị.
Data dara dị ka mmiri ozuzo. Mgbe enwere obere ntakịrị, ọ naghị enwe afọ ojuju – ị ga-eme ka ụgbọ ala gị ruru unyi wee megharịa mkparịta ụka ahụ. Chọta onwe gị ka ị na-ehichapụ ntụpọ na iko gị ka onye ọ bụla na-ewepu ebe data na-enweghị usoro, nweta site na isi mmalite.
Stele mmiri na ọdọ mmiri dị ize ndụ. Data, anakọtara site na ọkọnọ a na-ejighị n'aka, nke a na-emeghị ka ọ dị ọcha ma ọ bụ nke a na-edozi ma hapụ ka ọ na-eto eto, nwere ike ibute nchoputa na-ezighi ezi.
A otu ebe mmiri nwere ike ịbụ naanị iji jupụta ụlọ nri ma ọ bụ kwado usoro ohia. Nanị isi data atọ (ọnụọgụ nke ozi ịntanetị ezigara, nke mepere emepe, na nke a pịa) nwere ike ịkwado mmemme ahịa.
A akara ahụ ike Enwere ike iji data dị n'ụdị obere mmiri mee ihe maka ịsa ahụ. A na-aga n'ihu data eruba na-enye ohere benchmarking na akụkọ ihe mere eme tụnyere. Enwere ike ime ka njikarịcha ọdịda peeji mezuo data na-agbanwe agbanwe oge niile.
A ezigbo mmiri nwere ike ike a na nkume igwe nri ịhụ osisi ma ọ bụ Mike ọka. Ngwa nkwanye chọrọ naanị onyinye a pụrụ ịdabere na ya site na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụtụ iji nye mmụba na uru ụgbọ ala ịzụ ahịa.
A mmiri mmiri nke nwere ike ịkwalite nnukwu ụgbọ mmiri na njupụta nke ozi zuru ezu nwere ike ịchụpụ ezigbo oge, sistemụ ọdịnaya nwere ike.
A osimiri nke ahụ sara mbara ma dị omimi nwere ike ịkwado ụlọ ọrụ njem niile. Ihe data zuru ezu nwere ike ịkwọ ụgbọ mmiri na ụgbọ ibu n'ụdị nke nchịkọta kuki site na netwọkụ mgbasa ozi, ndị na-achịkọta data data iguzosi ike n'ihe, na ndị na-ere data.
Mgbe data rutere na atụmanya a tụrụ anya na oge ndị a tụrụ anya, enwere ike ijide ya, kenye ya ma tinye ya n'ọrụ. Usoro mmiri, mmiri mmiri na mmiri na-enye mmetụta nke njikwa ma nye ohere maka owuwu ihe owuwu na-agbasawanye mgbe niile na canals, mkpọchi na dams. E wuru ụlọ nkwakọba ihe na mmiri ndị na-enweghị ntụkwasị obi.
Dị ọcha bụ Ihe Na-esote linessdị Nsọ Chineke
Mmiri di ocha di nkpa maka oganihu nke ndu, igba mmiri, osisi oku ike, wdg. Nkowa nke ‘di ocha’ puru igbanwe ya maka nzube; Ọ dị mma ma ọ bụrụ na algae dị na mmiri nke na-eme ka ụlọ ọrụ ike dị jụụ ma ọ gaghị anabata ya ma ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị akụkụ 10 kwa ijeri arsenic na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Data bụ otu. Na a ozugbo akwụkwọ ozi ngwa, ma ị nwere aha mmadụ (Maazị, Oriaku, Nwada) bụ ndị bara uru… belụsọ na ị na-eziga ndị dọkịta. Ma data ruru unyi ga akwatu gi oge obula.
Dị ka US Chief Data Scientist, DJ Patil, tinye ya na nnọkọ mbụ nke CTO Summit, “Ọ bụrụ na ị naghị eche maka otu ị ga - esi debe data gị ọcha site na mbido, ị ga - ada ^ ¢ & ed. M na-ekwe nkwa ya. Inggbalị ọcha ya mgbe ihe ahụ gasịrị ga-ewe ọnwa ma ọ dịkarịa ala. ”
Ọ bụrụ na ị kpoo mmiri ọkụ na ebe ị na-esi esi, ọ nwere ike ime ka ọrụ niile gbanwee. Data yiri ka ọ na-eme otu ihe ahụ. Site na mgbe kọmputa nwere ike ịchekwa yana gbakọọ, anakọtara data ọsọ ọsọ dịka enwere ike ịmepụta ngwa nchekwa iji mee ya.
Ọdọ data ahụ
Ka data sitere na ndị ọrụ mmiri ndị a na-abanye na igwe igwe ihe, ha niile gwụchara na ọdọ, n'azụ mmiri ahụ. Dika a na-eweputa data na ejiji a na-achịkwa, ọ na-enye ike turbines nke ụlọ ọrụ data; ndị ahụ nnukwu engines nke nhazi data na aha dika Google na Facebook. A gaghị enwe ụkọ mmiri n’ebe a.
N'ikpeazụ, e nwere ọdọ mmiri miri emi, na-eche ka onye nyocha ahụ banye n'ime ya. Ngwa ngwa ngwa na egbe ube n'aka, onye nyocha ahụ na-enyocha miri emi, maapụ ala ọhụrụ ma chọpụta ụdị ọhụrụ. Ọ bụ oge na-atọ ụtọ ịbụ onye nyocha data.
Ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime ha ji na-egosi maka Nzukọ eMetrics kemgbe 2002. Oge ọzọ dị na Boston, Septemba 27 ruo Ọktọba 1, 2015.
Ndebanye aha eMetrics Summit
Akwa Akwa Oke
Gini banyere ike nke data iji wayo Grand Canyon na-esote? Kedu maka agbaze agbaze nke data ahaziri? Kedu ka anyị si emeso mmiri mkpofu n'ime ụwa na-amawanye nzuzo?
Ndị ahụ bụ ajụjụ maka oge ọzọ na mmiri n'okpuru akwa.
Tags: Analyticsdataịdị ọcha datasayensị dataemetricsemetrics Summit
Jim Sterne bụ onye ndụmọdụ mba ụwa nke na-elekwasị anya n'ịlele uru ịmepụta na iwusi mmekọrịta ndị ahịa ike. Sterne dere akwụkwọ asatọ na mmekọrịta mmekọrịta, bụ Onye isi ntọala na Onye isi oche nke ugbu a Analytù Nyocha nke Dijitalụ ma na-arụpụta ihe Nzukọ eMetrics na Nzukọ Nchịkọta Mgbasa Ozi.
Button Zụrụ ga-enyere Social Media Onyinye na ROI?